I-imeyile kwi-Acid: Ukuvavanywa kwe-imeyile, ukusombulula iingxaki kunye neZenzo eziBalaseleyo | Martech Zone
Kukho izizathu iinkampani ezininzi ziceba ukuchitha ixesha elininzi kunye nemali kwintengiso ye-imeyile ngo-2016: ukuthengisa nge-imeyile iyaqhubeka nokubamba eyona ROI iphezulu kuzo zonke iindlela zentengiso yedijithali.
Wonke umthengisi unomboneleli weenkonzo ze-imeyile kunye noluhlu lokujonga uphuhliso lwe-imeyile. Kodwa kude kube ngokufuthi bajonge i-crux yephulo: ukuvavanya i-imeyile yabo kwizixhobo ezininzi kunye nabathengi ngaphambi kokumisela iphulo lokuhambisa. Nangona uninzi lwemikhankaso yovavanyo ngokuthumela i-imeyile kwi-inbox okanye kwi-inbox ye-Gmail, ayonelanga. Ngoba? Kuba wonke umxhasi we-imeyile unikezela ikhowudi ngokwahlukileyo.
I-imeyile kuVavanyo lweAcid
Imeyile kwi-Acid ibonelela ngovavanyo lwe-imeyile, ukusombulula iingxaki kunye nokuqhubela phambili kubahlalutyi izixhobo zokunceda iinkampani zenze lula kwaye ziphucule iinzame zazo zokuthengisa nge-imeyile. Inkampani ivavanya imikhankaso ye-imeyile kubaxhasi be-imeyile abahlukeneyo abangama-45 kunye nezixhobo kwaye ibonelele ngezixhobo ukusombulula imiba yokuhanjiswa. Eyilwe ngo-2009, i-imeyile kwi-Acid incede iinkampani ezingaphezu kwama-80,000 kwihlabathi lonke ukuvavanya ii-imeyile zazo.
Abathengisi basebenzisa i-imeyile kwi-Acid ukwenza lula ukuvavanya ii-imeyile ezenziwe ekuqaleni kunye nakumboneleli wesevisi ye-imeyile. Kodwa ayisiyiyo yonke-i-imeyile kwiAcid ibonelela ngezixhobo ezahlukeneyo, kubandakanya:
Ikhonkco kunye nokuqinisekiswa komfanekiso
Uhlalutyo lwekhowudi kunye nokwenza ngcono i-HTML
Ukujonga iphepha kwiphepha lewebhu kubathengi abaninzi bewebhu nakwizixhobo eziphathwayo
Ukongeza kwisiseko sayo sesixhobo, i-imeyile kwiAcid ibonelela ngezixhobo ezininzi kunye nenkxaso yabathengi engenakuthelekiswa nanto. Iforum yoluntu equkethe abathengisi be-imeyile, iikhowudi kunye nabaqulunqi ziyafumaneka kuye nakubani na, simahla. Kwaye i-imeyile kwiziko leZibonelelo zeAcid ibamba ilayibrari yokuphendula simahla kunye neetemplate ze-imeyile ezingamanzi ezihlaziyiweyo, izikhokelo, amaphepha emhlophe nokunye.
Ukubaluleka kovavanyo lwe-imeyile
Abaxhasi be-imeyile kunye nezixhobo eziphathwayo zibonisa i-HTML ngokwahlukileyo kuba umthengi ngamnye unikezela i-HTML ngendlela yayo. Kungenxa yoko le nto ikhowudi yakho inokushiywa ilungile kwi-Outlook kodwa ijongeka intle kumthengi wakho we-Gmail.
Ukuba awuvavanyi ukuxilonga imiba yokufaka iikhowudi kunye nokuhanjiswa ngaphambi kokuba uthumele iphulo lakho, ukubandakanyeka kwe-imeyile yakho (kunye nophawu kunye ne-ROI) kunokuba nefuthe elibi. Ngapha koko, iipesenti ezingama-70 zabantu abathi bazakuyicima i-imeyile kwangoko ukuba ayinikezeli ngokufanelekileyo kwi-inbox.
Uphuhliso lwe-imeyile ezona ziNdlela ziBalaseleyo
Ukuba umtsha kwihlabathi le-imeyile, unokulufumana lonke olu lwazi lukhulu kakhulu. Iindlela zangoku zokufaka iikhowudi kwiwebhu zinenkxaso encinci kubaxhasi be-imeyile kwaye ngeli xesha abantu baqhubeka bekuxelela ukuba usebenzise iitafile. Nantsi into, iitafile ezikwikhowudi ye-imeyile ziyimfuneko, ke cwangcisa ukuba yingcali kuzo. Ezinye izikhombisi:
Uyilo lwekholamu enye yenza ubomi bube lula! Yanele uninzi lwee-imeyile (iileta zeendaba azifani) kwaye iya kwenza kube lula ukulungiselela izixhobo eziphathwayo.
Sebenzisa i-600px ububanzi ukulunga kakuhle kuninzi lwabathengi bewebhu kunye nedesktop. Ubungakanani bunokuhliswa ukuze ulingane nezikrini ezihambayo xa usebenzisa imibuzo yemithombo yeendaba okanye uyilo lwe-hybrid fluid (funda okungakumbi malunga noku).
Xa ungathandabuzeki, itafile. Khohlwa divs kwaye uyadada. Iitafile zezona ndlela zithembekileyo zokufezekisa ubume obungaguquguqukiyo. Obu buchule sisiseko sokuphendula kunye nokuyila okungamanzi kwaye ikuvumela ukuba uthathe ithuba lokuhambelana nokulungelelanisa uyilo lwakho.
Gcina abasebenzisi beselfowuni engqondweni. Abanye abayili baye batshintshela kuyilo "lweselfowuni kuqala". Le ndlela iphumelele ngokukodwa kwii-imeyile ezilula ezinje ngokuseta kwakhona ipaswedi, ii-imeyile zentengiselwano, kunye nohlaziyo lweakhawunti.
Kwaye i-imeyile kwiAcid isandula ukukhutshwa simahla, umhleli we-imeyile esekwe kwiwebhu. Lo mhleli uvumela abasebenzisi ukuba bakhe, ukuhlela, ukujonga kuqala kunye nokwenza ii-imeyile kwisicelo esinye ngexesha langempela.
Vavanya, Vavanya, Vavanya!
Ukwenza iikhowudi kwi-imeyile kunokuba nzima. Olona hlobo kuphela lokuqinisekisa ukuba i-imeyile yakho iyakubonakala intle kuyo yonke indawo kukuyivavanya. I-imeyile kwi-Acid inokukunceda oko ngokwenza izikrini zemeyile yakho kubo bonke abathengi be-imeyile kunye nezixhobo kwimizuzwana engaphantsi kwe-30.
Ukongeza kwiinkonzo zokuvavanya i-imeyile, i-imeyile kwiAcid inikezela ngeengcebiso malunga neengxaki kunye nolwazi kuyo nayiphi na imiba odibana nayo, uvavanyo langaphambi kokuthunyelwa kogaxekile, kunye nokuthunyelwa kwe-imeyile okuphambili kubahlalutyi. Inkampani ikwabhala ibhlog ebalaseleyo ebandakanya izihloko ezinje Ukusombulula ingxaki ubude beLayini kwi-imeyile ye-HTML or Awona maqhinga oPhuculo lwe-imeyile kunye neeHacks.
Ngobuninzi babathengi be-imeyile kunye nezixhobo ezikhoyo, ukuvavanywa kwe-imeyile ayisiyonto ilula; yimfuneko. Thatha iinzame zakho ze-imeyile ziye kwinqanaba elilandelayo:
Bhalisela ukuvavanywa kweSIMAHLA SAMAHLA nge-imeyile kwiAcidi!
tags: emailUmakhi wemeyileUyilo lwe-imeyileuphuhliso lwe-imeyileUmhleli we-imeyileimeyile kwi-asidiUkunikezelwa kwe-imeyileUvavanyo lwe-imeyileububanzi be-imeyileimeyile ephathekayoumhleli we-imeyile esekwe kwiwebhu
Epreli 18, 2016 ngo-10: 19 AM
Iingcebiso ezintle! Kuvakala ngathi sisixhobo esikhulu, nangona sele ndisebenzisa i-GetResponse. Kubaluleke kakhulu ukwenza iimvavanyo ze-A / B zephulo le-imeyile. Into ebonakala intle isenokungabikho kolunye uluvo lwabanye.